Shuruucda Adeegga SAHAL | Golis Telecom Somalia
Shuruucda Adeegga SAHAL
SHURUUCDA MACMIILKA EE ADEEGGA SAHAL
Shuruucdani waxay qayb ka yihiin xeer hoosaadka aasaasiga ah ee adeegga SAHAL. Waxaana diyaarisay Shirkadda Golis, wuxuuna meesha ka saarayaa dhamaan shuruucdii ka horaysay , shirkadda Golis ayaana ku samayn karta wax ka bedel; markasta oo ay shirkaddu wax ka bedeshana waxa ay ku samaynaysaa faafin. Macmiilka Golis ee isticmaalaya adeeggan isla markaasna akhriyey ama ogaaday jiritaanka shuruucdan waxay ka dhigan tahay inuu aqbalay.
Golis: Golis Telecom Somalia
SAHAL: waa adeeg maaliyadeed oo ay Golis bixiso
Macmiil: macmiilka furta ugu yaraan mid ka mid aha Akoonada SAHAL (midka shakhsiga ah ama midka ganacsiga)
SIM: waxa loo soo gaabiyey “subscriber identity module”, waana kaarka macmiilka ee ku suntan jiifarada u gaarka ah ee Golis
Akoon (A/C): waxa loo soo gaabiyey “account”, oo looga jeedo markan “akoonka SAHAL”, wuxuuna u taagan yahay labadaba mid shakhsi iyo mid ganacsi.
PIN: waxa loo soo gaabiyey “personal identification number”, afarta xaraf ama jiifar ee sirta u ah macmiilka si uu ugu furto akoonkiisa SAHAL.
Electronic: lacagta SAHALka ah ee matalaysa kaashka kuu yaal Golis
Lacag dhigasho (Deposit): electronic-ga aad ku shubato A/C-kaaga.
Lacag la bixid (Withdraw): waa ku bedelashada electronic-ga akoonkaa kuuga jira lacag waraaqo ah.
Akoon aasaasi ah: waa akoon shakhsi ah oo xadigiisa lacageed yahay laba kun oo dollar ($2000)
Akoon darajada 2aad (silver account): waa akoon shakhsi ah oo xadigiisa lacageed yahay toban kun oo dollar ($10,000); wuxuuna leeyahay shuruudo u gaar ah.
Akoonka darajada 3aad (golden account): waa akoon shakhsi ah oo xadigiisa lacageed yahay labaatan kun oo dollar ($20,000); wuxuuna leeyahay shuruudo u gaar ah.
Salaam Bank: waa baanki xiriir la leh adeegga SAHAL islamarkaasna ah hay’ad ganacsi oo madax banaan.
Kaaftoon: waa adeeg isku xira Salaam Bank iyo adeegga SAHAL oo suurtagelinaya inaad lacag dhigato kana qaadato baanka Salaam.
SAHAL waa mid ka mid ah adeegyada ay Golis bixiso. Macmiilki doorta inuu isticmaalo wuxuu helayaa adeegyada kala ah lacag dirid, lacag helid, lacag dhigasho, lacag la bixid, ku shubasho lacag hadal, xawaalad iyo keyd bangi. Taas bedelkeeda, macmiilka waxaa ku waajibaya khidmadaha adeegga la socda (sida lacag diridda iyo xawaaladda) Kuwaas oo faahfaahintooda la heli karo. F.G waxaa jira adeegyo badan oo aan khidmad lahayn.
Adeegga SAHAL waxaa isticmaali kara macmiil kasta oo buuxiya shuruudaha diiwaangelinta.
Macmiilka waxaa waajib ku ah inuu bixiyo xogtiisa saxda ah marka la diiwaangelinayo,una isticmaalo adeegga si waafaqsan sharciga u gaarka ah adeegga iyo midka dalka.
Lacagta uu macmiilku dhigto (Deposit) shirkadda Golis waxay ku tahay dayn, macmiilkana waxay u tahay keyd. Sidaa darteed, macmiilku wuxuu qaadan karaa markasta oo uu u baahdo Lacagtiisa iyadoo aysan jirin khasaare iyo faa’iido midna.
Xadiga lacageed (Limit) ee akoonka aasaasiga ah waa $2000 (laba kun oo dollar). Waxaana jiri kara akoono loo aqoonsan karo darajada 2aad iyo 3aad oo qaadi kara xaddi lacageed oo kabadan laba kun oo dollar, waxayna yeelanayaan shuruudo u gaar ah.
Ammaanka iyo ilaalinta Akoonka (A/C) SAHAL
Golis waxay mas’uul ka tahay dhowrista iyo cillad-bixinta wixii shaqada akoonada (a/c) kaga yimaada dhinaca farsamada shabakadeeda iyo xaqiijinta inuu macmiilku heli karo bedelka lacagta waraaqaha ah ee u dhiganta Electronic-giisa.
Xogta macmiilka SAHAL (macluumaadka diiwaangelinta iyo dhaqdhaqaaqa lacageed) waxay sir u tahay macmiilka iska leh oo keliya. Si sharci darro ahna cid kalena looguma daahfuri karo.
Macmiil walba isaga ayaa masuul ka ah xifdinta & ilaalinta SIM, Kalmadda Sirta ah (PIN), & Kaaftoonkiisa
Doorashada isticmaalka adeegga waxaa iska leh macmiilka, khaladaadka ama ilduufka xagiisa ka yimaada wixi kaaga luma Golis mas’uul kama aha. Mana jirto magdhow lacageed ama wax u dhigma oo ay shirkadda Golis bixinayso oo arrintaas la xiriirta.
Haddii dhac hubaysan la gaaga qaado Mobile-kaaga iyo sirta wixi aad ku waydo waxay la mid yihiin hantida kale ee la kala dhaco. Golis mas’uul kama aha dacwadda, cabashada iyo dabagalka arrintaas la xiriirta.
Macmiil walba isaga ayaa masuul ka ah dhaqdhaqaaqyada la sameeyo ayadoo la adeegsanayo Mobile-kiisa (akoonkiisa SAHAL). Isaga ayaana loo aanaynayaa wixi khalad ah ee lagu galo telefoonkiisa SAHALka ah.
Macmiil kasta oo lacag ku bedasha electronic waa inuu hubiyaa inuu helay fariintii ama fiiriyaa haraaga akoonkiisa (A/C), si uu u hubiyo lacagtii ugu soo dhacday inta uu la joogo laamaha shirkadda ama goobaha ganacsi.
Macmiilka si uu haraagiisa u la socdo waxaa muhiim ah inuu booqdo A/C-kiisa isagoo isticmaalaya dariiqada lagu ogaado haraaga (1. Itus haraaga).
Macmiilka haddii laga xado kaar SAHAL ah waxay Golis siisay fursad uu kaga xiran karo A/C-koonkiisa qofka ugu dhow ee SAHAL leh (wargelin mobile lumay).
Si loo caawiyo macmiilka haddii uu ka lumo telefoonkiisa SAHAL-ka ah waa inuu sida ugu degdeg badan uu ku wargeliyo xafiisyada Golis ee ku shaqada leh.
Lacag khaldantay waxay Golis u taqaan lacag lagala ilduufay lambarkii loo waday, oo cadaynteeda la xaqiijin karo.
Si loo caawiyo macmiilka lacagi ka khaldanto waa inuu cabashadiisa ku soo gaarsiiya shirkadda sida ugu dhakhsaha badan.
macmiilna dacwad kama keeni karo, xogtiisana ma warsan karo dhaqdhaqaaq uusan isagu akoonkiisa ka samayn.
Marka ay timaado xallinta cabashooyinka, macmiilka waxaa waajib ku ah inuu u hoggaansamo habraacyada shaqo ee xafiisyada u adeegaya, si looga fogaado in daryeelka hal macmiil ay ka dhalato ku xad-gudubka mid kale.
Macmiilku wuxuu warbixin ku helayaa :
fariin la socota dhaqdhaqaaq kasta
isagoo akoonkiisa ka dhexbaari kara dhaqdhaqaaqyadii soo maray (5/2. Itus dhaqdhaqaaqa
iyo inuu markasta si joogto ah haraaga A/C-koonkiisa u booqan karo.
Dhamaan Arrimahaas wuxuu macmiilku kaga maarmi karaa daabacaadda waraaqaha.
Macmiilka geeriyooda waxaa maaliyadiisa loogu dhiibayaa wakiilka warasada.
Haddii wakiilka warasadu uu buuxin waayo shuruudaha sharciga islaamka waafaqsan waxaa arrintaas loo gudbinayaa hay’adaha sharciga.
Akoonada shakhsiga ah (customer A/Cs) waxaa la bedeli karaa:
Markii macmiilki iska lahaa geeriyoodo
Markii la xaqiijiyo in macmiilkii iska lahaa uu lumiyey mulkiyadi kaarka. Taasoo loo tixraacayo shuruucda daryeelka macaamiisha ee kaararka.
Markii laba macmiil ay qaab sharciga waafaqsan isugu wareejiyaan.
Akoonda meheradaha (Merchants A/Cs) waxaa lagu bedeli karaa:
Haddii meheradda jiritaankeedu si rasmi ah meesha uga baxo
Haddii shirkadda ay u caadato in macluumaadki meheradda isbedel ku dhacay.
Akoonkii sifa sharci ah lagu bedelo lacagta ku jirta waxaa loo dhiibayaa wakiilka warasada.
Golis waxay xaq u leedahay inay xirto A/C-ka SAHAL:
Haddii akoonka (A/C) loo isticmaalayo si khilaafsan sharuucda adeegga iyo midka dalka.
Haddii aan xaqiijino in akoonka macmiilka ay cid kale si joogto ah u isticmaalayso.
Haddii aan xaqiijino in xogtii macmiilku isku diiwaangeliyey ee kaarka ama SAHALka, ama labadaba, qayb ahaan ama gebi ahaanba, ay been ahayd.
Haddii akoonka (A/C) macmiilku uusan shaqayn muddo sannad ah.
Haddii macmiilku soo gudbiyo cabasho been ah taasoo sababi karta in macmiil kale lagu gabood falo, ayna isla xaqiijiyaan xafiisyada maamulka ee ay khusayso.
Haddii macmiilku si ku talagal ah u isticmaalo lacag ku soo khaldantay.
Haddii la ogaado in macmiilku geeriyooday.
Haddii akoonka la xiro lacagta ugu jirta macmiilku, haddii uu xaq u yeesho, wuxuu ka qaadan karaa laamaha Golis.